“Sidaan Doonayo Waxba Uma Socdaan” – Xiddig Chelsea Ah Oo
By Apdihakem Omer Adam	 On Oct 12, 2020
Daafaca bidix ee kooxda Chelsea ee Emerson Palmieri ayaa shaaca ka qaaday sida uusan ugu qanacsanayn waxa ka socda kooxdaas balse uu taas bedelkeeda wanaag ku dareemo marka uu joogo xulkiisa qaranka Talyaaniga.
“Kumaad Fashilmin Ozil Ee Waxaad Ku Fashilantay…..” Wakiilka
Emerson ayaan ilaa hadda kulan horyaalka ah u ciyaarin Chelsea isaga oo dookha saddexaad ka ah booskiisa kana dambeeya saxeexa cusub ee Ben Chilwell oo kooxda 50 Milyan oo Pound ku yimid iyo Marcos Alonso.
Emerson ayaa lala xidhiidhinayay inuu dib ugu laaban doono horyaalka dalkiisa Talyaaniga oo uu Inter Milan kula biiri doono tababarihii keenay Chelsea ee Antonio Conte.
Dhibta ku haysata Chelsea bedelkeeda waxa si weyn u aaminsan tababaraha Talyaaniga ee Mancini kaas oo ciyaarsiiya kulamada qarankaas walow uusan xataa wakhti ciyaareed ku filan ka helin Stamford Bridge.
Palmieri ayaa sheegay in marka uu tago Talyaaniga uu dareemo inuu muhiim yahay oo uu hab-fikirkiisa bedelo laakiin ay xaaladu sidaas ka duwan tahay marka uu Blues la joogo.
“Marka aan halkan yimaado maskaxdayda waan bedelaa, waxaan dareemaa inaan muhiim ahay oo aan qayb ka ahay xulka” ayuu yidhi Emerson kaddib kulankii ay xalay bar-bardhaca 0-0 ah lasoo galeen xulka Poland.
“Marka Chelsea la joogo arrimuhu uma socdaan sidaan jeclaan lahaa qaybtan xilli ciyaareedka kamid ah”
Ben Chilwell oo ah ciyaaryahanka ku fadhiya booska uu doonayo Emerson ayaa kulankiisii ugu dambeeyay ee kooxdaas gool iyo caawin soo sameeyay isaga oo ka caawiyay inay guul 4-0 ah ka gaadhaan Crystal Palace.